Waxaan rabaa inaan joojiyo - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » Waxaan rabaa inaan joojiyo
Markaad tubaakada u joojiso si wanaagsan, waxaad qaadaysaa tallaabada keliya ee ugu muhiimsan xagga faa'iidooyinka sida inaad caafimaad qabto, inaad lacag keydsato iyo inaad qoyskaaga nabad geliso. Haddii aad tahay qof sigaar caba, isticmaal dheecaan, ama isticmaal sigaar elektaroonig ah (oo loo yaqaanno sigaarka elektaroonigga ah ama e-cigs), waxaad ka heli kartaa caawimaad inta ugu yar ama yar sida aad rabto. Tubaakada waa mid aad u la qabatimo, waxayna qaadan kartaa isku dayo badan oo ugu dambeyn si wanaagsan loo joojiyo. Isku day kastaana waa la tiriyaa!
Qalabkan bilaashka ah iyo barnaamijyada taageerada ayaa ku siinaya fursado badan oo aad ku joojiso sigaar cabista ama tubaakada kale habka adiga kuu shaqeeya. 802Quits barnaamijyada, sida Quit Online ama Jooji Taleefanka (1-800-QUIT-NOW) waxaa ka mid ah qorshooyinka joojinta.
Samee Qorshahaaga Joojinta>
Hel Caawinaad Joojinta>
Hel Hagaha Joogtada Bilaashka ah
Haddii aad dhowr jeer isku dayday, ama tani ay tahay isku daygii ugu horreeyay, waxaad leedahay sababo kuu gaar ah oo aad u rabto inaad joojiso. Tilmaamahan oo ka kooban 44 bog ayaa kaa caawin doona inaad talaabo-tallaabo u qaadatid inaad ogaatid waxyaabaha kiciya, waxaad diyaar u ahaaneysaa caqabadahaaga, saf u sameeysaa taageerada, go'aansataa daawooyinka iyo inaad joojiso. Haddii aad tahay reer Vermonter oo aad jeclaan lahayd inaad codsato Tilmaamaha Joojinta, fadlan emayl u dir tabavt@vermont.gov ama kala soo bixi Tilmaamaha Joojinta Vermont (PDF).